Knowledge Archive - LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် | လွှဲပြောင်းတိပ် | ကော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Professional ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်ကားအရောင်းဆိုင်ပုံနှိပ်
နေအိမ် » အသိပညာ
ပလတ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက် Panel ကိုများအတွက်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Where is the competitiveness of protective film?
by admin on 2018-12-28
Nowadays, the protective film can also be glued to adhere. Usually there are two kinds of glue, the adhesion of acrylic glue is strong, and the silica gel has good high temperature resistance. The earliest rise of PE protective film was in Japan and Europe and the United States. Due to the low level of previous production in China, most…
Teach you how to distinguish high quality electrostatic film
by admin on 2018-11-15
In recent years, the emergence of electrostatic membranes has brought new vitality to the protective film market. There are traces of electrostatic film everywhere. There are mobile phone film, glass film and metal film on the market. Almost all kinds of electrostatic film are bought. The appearance of electrostatic film has gradually replaced the film. Why is the rubber film…
ပင်မ LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ Features
LDPE ရုပ်ရှင်အဓိကအားဖြင့်ထုပ်ပိုးအတွက်အသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာထုပ်ပိုးအဖြစ်, စက်မှုဇုန်အစိတ်အပိုင်းများ, ဖိနပ်, အဝတ်အစား, စသည်တို့ကို, ဒါပေမယ့်အလိုအလျောက်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်သကြားတွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်, ဆားငန်, စသည်တို့ကို. ဒါဟာကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ် ...
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း, နမူနာ & Quote, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
E-mail ကို: javierxie@hualibao.com.cn
NO.10 FENGJIAN လမ်း, XINGTAN Town, SHUNDE ခရိုင်,FOSHAN CITY, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်. 528325
မူပိုင် © 2019 ဂွမ်ဒေါင်း HUALIBAO CO ။ , LTD မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.